याेगा, व्यायाम, फिटनेस | Ratopati
तन, मन र वचन शुद्धताका लागि योग access_timeअसार १२, २०७७
आध्यात्मिक परिभाषा अनुसार मन र आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने क्रियालाई योग भनिन्छ । शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतनायुक्त भएर जिउने कलालाई पनि योग भनिन्छ । संस्कृत भाषामा योगलाई जोड्नु भनेर बुझिन्छ । योग नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जन्मिएर ...
लकडाउनमा नेता, व्यवसायीदेखि सेलिब्रेटीसम्मको यस्तो छ फिट्नेस तरिका access_timeबैशाख १०, २०७७
कोरोना भाइरसको त्रासका कारण देशमा करिब एक महिनादेखि लकडाउन जारी छ । लकडाउनका कारण अहिले व्यापार, व्यवसाय, अफिसलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यो समय नेता, कलाकार, व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण घरको ४ कुनामा सीमित भएर बसेका छन् । यो लकडाउनको समयमा नेतादेखि कल...
पूर्वीय समाजबाट सुरु भएको योग पश्चिमा देशमा तीव्र गतिमा फैलिँदै access_timeफागुन ४, २०७६
काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा शारीरिक अभ्यासका लागि विभिन्न सेन्टर खुलेका छन् । निजी क्षेत्रहरुद्वारा शारीरिक अभ्यासका लागि जुम्बा, एरोबिक, जिमखाना, योग सेन्टर आदि सञ्चालन गरेका छन् । यसरी जुम्बा, एरोबिक, जिमखानामा गरिने व्यायाम अनि साँझबिहान हिँडेर गरिने...
‘विधिपूर्वकको योगले ९० प्रतिशत रोग निको हुन्छ’ access_timeमाघ १, २०७६
आज योग दिवस । पछिल्लो समय योगको चर्चा र महत्त्व बढेर गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल स्कुल अफ योगा (प्रेमानन्द) को संस्थापक तथा स्कुल विभागका प्रमुख शिव बस्यासलसँग दीपक भेटवालले गरेको कुराकानी: आम मानिसले योगलाई कसरी बुझ्ने ? योगलाई आमरूपमा शारीरिक अभ्...
किन हिँड्ने ? यस्तो पो हुँदो रहेछ हिँड्दा... access_timeपुस २४, २०७६
हामी हिँड्नु किन जरुरी छ ? यसले शरीरमा के के हुन्छ ? सबैले थाहा पाएकै कुरा हो हिँड्नु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ । राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्म जो कोहीले पनि जानेकै कुरा हो ः शरीर स्वस्थ राख्नको लागि हिँड्नु अत्यन्तै फाइदाजनक छ । खासगरी, ४० उमेर कटेपछि ...
स्वस्थ रहनका लागि ३० दिनको उठबस access_timeबैशाख ११, २०७६
तपाईं आफूलाई स्वस्थ र निरोगी राख्न चाहनुहुन्छ ? यो कुरा पक्का छः उत्तर शतप्रतिशत हो भन्ने नै आउँछ । त्यसो हो भने, आउनुहोस्, तपाईं दैनिक रुपमा यो तालिकाअनुसार उठबस गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । दिन ०१ः ५० पटक दिन २ः ५५ पटक दिन ३ः ६० पटक दिन ४ः आराम दिन ५ः ७० पटक ...
हेल्थ टिप्स : नियमित योग गर्नुका फाइदा access_timeफागुन २५, २०७५
व्यस्त जीवनशैली, अस्वस्थकर खाना र व्यायाम नहुँदा दैनिक अनेकन रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । दैनिक ३० मिनेटमात्रै योग गर्ने हो भने जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले औंल्याइसकेको छ । आज आयूर्वेदक चिकित्सक डाक्टर छितिज बराकोटीले योग किन गर्ने...
तौल घटाउन के गर्ने ? access_timeमाघ २६, २०७५
काठमाडौँ । पछिल्लो समय उमेरको अनुपातमा धेरै तौल अर्थात मोटोपन भएका मानिसहरुको संख्या बढ्दो छ । मोटोपन स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन । आवश्यकता भन्दा धेरै मोटो हुनु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिदैन । त्यसैले त मोटोपनकै कारणले विभिन्न रोगहरु पनि देखा परिरहेका ...
गाईको घ्यूले तौल घटाउन र पेटको बोसो कम गर्न सहयोग गर्छ, यस्ता छन् फाइदा access_timeमाघ ७, २०७५
तौल कम गर्ने सोचमा भएका धेरैले घ्यू खाँदैनन् तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने घ्यूले मोटाइँदैन । वास्तवमा घ्यू विभिन्न गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । घ्यूले खाना पचाउन, घाउ भर्न, एलर्जीलाई टाढा राख्न, हड्डीलाई बलियो बनाउन निकै सहयोग गर्छ । यी फाइदाका साथै गाईको घ्यू...
गर्भनिरोधक औषधी खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? डाक्टर यसो भन्छिन् access_timeपुस १०, २०७५
गर्भनिरोधको जिम्मेवारी विशेषगरी महिलाकै हुन्छ । यसकारण अनावश्यक गर्भबाट रोक्नका लागि पिल्स खान्छन् । लगातार इमर्जेन्सी पिल्स खाएपछि महिला आफूमा परिवर्तन महसुस गर्छन् । यसमा अचानक तौल बढ्नु पनि एक हो । महिलाका लागि योभन्दा ठूलो कुरा के होला । त्यसो भए के पिल्सले तपाईंको त...
डाक्टरको टिप्स : जाडोमा मर्निङवाक गर्ने कि नगर्ने ? access_timeपुस ७, २०७५
काठमाडौँ । स्वास्थ्य रहनका लागि हिँड्नु पर्छ । शरीर स्वास्थ्य राख्ने हो भने बिहान कम्तीमा पनि ३० मिनेट हिँड्नु पर्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ । बिहानको समयमा हिँड्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो । गर्मी मौसममा बिहान हिँड्दा स्वास्थ्यमा खासै नकारात्मक नपर्ने भएपनि जाडोको समयमा भने मर्...
के प्रोटिनले तौल कम गर्न सकिन्छ ? access_timeकात्तिक २, २०७५
जेसिका ब्राउन /बीबीसी फ्युचर २० औं शताब्दीको सुरुवातमा आर्कटिकमा अनुसन्धानका लागि निस्किएका विल्जाल्मर स्टेफन्सनले पाँच वर्षसम्म मासु मात्र खाएर बिताए । यसको अर्थ यो थियो कि उनको खानामा ८० प्रतिशत मासु र २० प्रतिशत प्रोटिन थियो । २० वर्षपछि सन् १९२८ मा स्टेफन्सनले लग...
पाचन शक्ति बढाउन वज्रासन access_timeअसार ३१, २०७४
दीपक नेपाल योग प्रशिक्षक व्यस्त दैनिकी तथा आधुनिक जीवनशैलीमा हाम्रो शरीरलाई आराम तथा व्यायामको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । तर, यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिन नसक्दा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ्य भइरहेका छौँ । बढ्दै गएको सहरीकरण र अव्यवस्थित जीवनशैलीले हाम्रो शरीरमा...